Kutenga Yekutakura Mawiricheya eVarwere Varwere
Kutakura varwere muzvipatara, nzvimbo dzekuvandudza kana zvimwe zvekurapa zvinogona kunetsa kana murwere asingafambi uye asingakwanise kuzvifambira ega. Mumamiriro ezvinhu akadai, yakavimbika, inoshanda uye yakachengeteka nzira yekutakura inodikanwa kuendesa varwere kuenda nekubva kumisangano mukati meiyo nzvimbo. Ichi ndicho chikonzero zvipatara zvine zvakawanda mavhiripu nekuti ivo vanofanirwa kupa kune akasiyana siyana epanyama zvido zvevarwere.
Kune vazhinji wiricheya sarudzo yeiyo remara munhu kubva pachigaro chemanheru chemanheru, magetsi emagetsi wiricheya nenzvimbo dzese mavhiripu. Macheya ese aya ave anobatsira remara vanhu, asi muchipatara kana nzvimbo yekurapa, imwe chete mhando ye wiricheya iri kudiwa chaizvo, mhando yekufambisa.
Kutenga kutakura mavhiripu yekumisikidzwa kuchipatara kunogona kunetsa nekuda kwesarudzo yakakura pazvitoro zvekurapa. Zvekugadzwa muchipatara, haudi mabhero ese uye muridzo uye zvimwe zvekushandisa hazvina basa. Usati waita kutenga kwekupedzisira, nyatsofunga nezve izvo zvaunoda. Ichakuchengetera mari pakupedzisira.
Izvo zvinodiwa mavhiripu inofanira kuva yakatsiga uye yakachengeteka. Ivo vanofanirwa kukwanisa kunyatsokwana munzvimbo dzenzvimbo uye inogona kupetwa kuitira nyore kuchengetedza.
Kuchengetedzwa kweMunhu wese
Rudzi rwemhando ye mavhiripu haisi iyo inonyanya kukosha kumurwere. Kana mabhureki asina kunyatsoiswa, iyo wiricheya inogona kubuda kubva pasi pemurwere uye inogona kukonzera kukuvara kwakanyanya kumushandisi.
Kuchinjisa varwere kupinda nekunze kwe wiricheya inoda kukotama uye kutakura murwere, iro rinogona kunge riri basa remutero kune vanamukoti kana varindiri.
Sezvineiwo, a transport chair inofanira kuve yakagadzirirwa otomatiki brake system. Kana muchengeti angoregedza mubato wekubata, otomatiki yekuvharira ficha inorova mukati, kukiya chigaro panzvimbo. Izvi zvinoita kuti kuendesa murwere kuve nyore uye kuve kwakachengeteka.